၂၀၁၆မှာ အမေရိကန် Walmartကို ကျော်တက်မည့် တရုတ်ပြည်ရဲ. Alibaba ~ The ICT.com.mm Blog
၂၀၁၆မှာ အမေရိကန် Walmartကို ကျော်တက်မည့် တရုတ်ပြည်ရဲ. Alibaba
မြန်မာပြည်မှ ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင်အချို.လည်း အသုံးပြုကြတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ e-commerce ဆရာကြီး Alibaba ဟာ အမေရိကရဲ. ကမ္ဘာကျော် e-commerce ဆိုဒ်တွေဖြစ်တဲ့ eBay, Amazon တို့ရဲ. တစ်နှစ်တာ onlineပေါ်မှာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို မှီလာပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်လောက်မှာ ၎င်းဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး retail firm ဖြစ်တဲ့ Walmartကိုတောင် ကျော်လွန်သွားနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူများက သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
Alibabaရဲ. CEO ဖြစ်သူ Jonathan Luကတော့ ၂၀၁၆ မတိုင်မီမှာ ယခု ရောင်းချနိုင်မှုထက် ၃ဆ ပိုမိုအောင်၊ ငွေကြေးအားဖြင့် USD 490 ဘီလီယံထိ ရည်မှန်းထားတယ်လို့ Reuters သတင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လည်း Alibaba ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှူပ်နှံမှုများကို တိုးချဲ့ သွားမှာဖြစ်ပြီး – လက်ရှိမြင်သာနိုင်တဲ့အရာကတော့ ၎င်းဆိုဒ်မှ ဝယ်ယူလျှင် ၂ ရက်အတွင်း အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သတင်းများအရ Alibabaဟာ ၎င်းရဲ. မွေးရပ်မြေ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဉီးဆောင်သူအဖြစ်ကို ပိုမို ခိုင်မြဲစေရေးအတွက် ၂၀၂၀ မတိုင်မီမှာ တရုတ်နိုင်ငံ retail industryရဲ. logistics and support ပိုင်းမှာ ၁၆ ဘီလီယံ မြှူပ်နှံသွားဖို့ ရာထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထို့အပြင် ယှဉ်ပြိုင်မှူတွေကြီးထွားလာသည့်အတွက်ကြောင့် ၎င်းရဲ. customer serviceကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Alibabaရဲ. ညီနောင် ဆိုဒ်များဖြစ်တဲ့ Taobao, Tmall တို့အတွက် ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်မှု ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ဂိုထောင်အသစ်များကိုပါ တည်ဆောက်ဖို့ အစီအမံများနဲ.အတူ ၎င်းစီးပွားရေးရဲ. လိုအပ်နေတဲ့ နေရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နေတာ ထင်ရှားနေပြီး Reuters ရဲ. ခန်.မှန်းချက်အရ တရုတ် တစ်ပြည်လုံးမှာ ရှိတဲ့ ထုတ်ပိုးကုန်များကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ပို့ဆောင်မှုရဲ. USD 5.69ဘီလီယံထဲက USD3ဘီလီယံဟာ Alibaba၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရင်းနှီးမြှူပ်နှံမှုများအပြင် Alibabaဟာ ၎င်းရဲ. Marketplaceဖြစ်တဲ့ Taobaoကို ဟောင်ကောင်နှင့် ထိုင်ဝမ်မှာ တစ်နှစ်ကြာ launchလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အရှေ့လက Singaporeမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ အရှေ့တောင်အာရှကို သိမ်းယူဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Newer နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကုဆေးရုံတွင် နားအတုစက်တပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးမည်
Older ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတစေရမည်
One thought on “၂၀၁၆မှာ အမေရိကန် Walmartကို ကျော်တက်မည့် တရုတ်ပြည်ရဲ. Alibaba”
Benard Muindi says:
ONLINE JOB OPPORTUNITY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Do you someone who is Jobless, Underpaid, business minded or needsaside hustle, and comfortable working on-line and aged between 20-35 years old, good in at least one of the following?
Fluent in both english and kiswahili languages,
Likes playing computer games,
Can develop computer software’s and applications,
Able to build and host websites
Likes surfing the net and hasaGmail , twitter andafacebook accounts
Then kindly forward his/her two names and location to MR.BENARD MUINDI of (Internet Marketing Africa ltd) +254721459685/ [email protected].
We have various career openings for marketers, where they will first undergoaone day training and they can either choose to work online either full-time or part-time depending on their flexibility and earn not less than ksh10,000 weekly but dependent on how aggressive they are.
Payments are weekly on FRIDAY through MPESA, PAYZA AND SOLID-TRUST.